Sugar Skull Tattoos Fikradaha naqshadaynta gabdhaha - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradaha Fikradaha Fikradaha Dumarka
1. Midabka midabka caleenta sonkorta leh ayaa hoos u dhajisa dhinaca bawdada haweenka
Midabka cas iyo cagaarka ee tattoo wuxuu siinayaa taabashada awooda ee gacanta dumarka.
2. Qalabka cagaaran ee casaanka, buluugga iyo cagaarka ugu fiican ee lafaha dumarka
Tattoo ugu fiican ee lugta dumarka ee u muuqata mid fiican.
3. Rinjiyeynta sida dharka sonkorta leh ee jilicsan ayaa lagu dhejiyaa gacmaha dumarka
Nooca tattoo-tintaani runtii waa mid cabsi badan sababtoo ah dareenka rinji.
4. Sonkorta calyada oo dharbaaxo leh oo kacday cagaha gabadha
Tattoo ugu fiican ee iyada, taas oo ka dhigi kartaa iyada oo eegaya dhamaystiran cagaha.
5. Qaboojiyaha sonkortu wuxuu kudhufaa xayawaanka 4 ee gacanta haweenka
Tattoo waxay noqon kartaa qaybta ugu wanaagsan ee jirka
6. Cagaarshaha sonkortu wuxuu ku yaalaa qaybta saxda ah ee gabadha oo ku taal dhinaca sare
Tattoo waxay ka buuxsantay dhinaca midig ee dhabarkeeda oo u muuqata mid weyn.
7. Taabashadda sonkorta ee ugu caansan waa lafdhabarta dhabarka dumarka
Tattoo Tani waxay daboolaysaa qayb ka mid ah gadaasha gabadha oo leh qaab quruxsan.
8. Qalabka caanaha ugu fiican ee sonkorta leh ee baalasha sare ee gadaashiisa gadaashiisa
Baalalka qallooca leh wuxuu si toos ah ugu xiraa qaybta danbe ee qoorta iyo sare ee gabadha.
9. Qalabka sonkorta badan ee sonkortu wuxuu ku shubaa gacanta gacanta
Tattoo ugu fiican ee gacanta gacanta bidix iyada oo leh midabyo badan ayaa bixiya muuqaal gaar ah.
10. Cajiibka sonkorta qurxoon ee quruxda badan wuxuu ku tashanayaa gacanta dumarka
Tani waa tattoo qurxoon ee ugu quruxda badan oo gacanta ka dhigaya mid aad u qurux badan.
11. Taabashadda sonkorta ee saxda ah iyo midda dhabta ah ayaa lagu dhejiyaa dusha sare ee gadaasha.
Tattoo waa runtii cajiib ah oo dhab ah raadinaya dheddig haween ah.
12. Nabarada sonkorta ee dhaadheer oo dhaadheer ah ayaa lagu dhejiyaa gacanta gabar ilaa askari
Tani waa tattoo buuxa oo dhan daboola qaybaha gacanta dumarka.
13. Cagaarshow sonkorta ayaa lafdhabar u ah gacanta gabadhu
Qeybta ugu caansan ee sonkortu waa mid ka mid ah qaybta askari ee gacanta si ay gacanta ugu jirto.
14. Tattoo ee dhinaca gadaasha gabadha
Tattoo ugu fiican ee gabadha ah si ay dib ugu soo celiso dhinaceeda.
15. Tabbaabinta sonkorta ee ugu fiican ee lagu dhejiyo qashinka oo ku buuxa ubaxyada gacanta gabadhu
Tattoo ugu fiican ee lagu daboolayo gacanta oo dhan quruxsan.
16. Cajiibka sonkorta cududa ah ee caanoodka ah ee loo yaqaan 'macho' ee loo yaqaan 'macho'
Tattoo ayaa runtii ku qososhay hubka macho gabadha.
17. Qalabka cambaradu wuxuu ku daboolaa dhabarka gabadha
Tattoo ayaa ka dhigeysa dhinaca danbe ee gacanta si tartiib ah oo soo jiidasho leh.
18. Labada lammaan ee ugu wanaagsan labadoodaba waa labada gabadh
Cabbirta sonkorta ee ugu fiican oo lagu dhajiyo barta labka ah ee gabadha
19. Qalabka caanaha ugu fiican ee la isku qurxiyo oo leh sheeko sida naqshadda gacanta gacanta
Tani waa tattoo midabada ugu fiican ee loogu talagalay gacanta gabar.
20. Sonkorta sonkorta sonkortu waa lafdhabarta dumarka dhabta ah ee dhinaca midigta
Tattoo ugu fiican ee qaybta gaaban ee gadaasha.
21. Tattoo ugu fiican ee lugta dumarka
Tattoo ayaa ku habboon in la siiyo taabashada xiiran ee lugta dumarka
22. Sonkorta ugu quruxda badan ee loo yaqaan 'tattoo' ee gacanta gabadha
Tattoo-yada ugu fiican ee gacanta gabadhu sababtoo ah way badan tahay.
23. Kalkaaliyaha sonkorta ugu fiican ayaa lafdhabar u ah dhabarka.
Tattoo wuxuu noqon karaa xulasho fiican oo ka mid ah.
24. Taabashadda sonkorta leh ee laxiriira maskaxda gadaasheeda gadaasheeda
Tani waxay noqon kartaa doorka ugu fiican ee qaybta sare ee dumarka.
25. Qalabka caanaha gaaban oo dhaadheer leh oo dhar-gaaban ku dhajisa barta gabadha
Tattoo-gu wuxuu siinayaa fiirin muuqaal ah oo ah gadaasha haweenka.
26. Cajiibka qumman ee caanaha kaamil ah oo lagu kalsoonaan karo ee gacanta dumarka
Cabbirka ugu fiican ee sonkorta ayaa lagu xiiraa gacanta gabadha si ay uga dhigto qurux badan.
Tags:dharbaaxo sawirada gabdhaha
lammaanahacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahsawirada gabdhahaTilmaamta jaalaha ahtattoo dheemanku dhaji tattoostattoo maroodigatattoos taajkiisawir gacmeedarrow Tattoohenna tattoolaabto laabtashaatiinka shiidantattoos qorraxdasawirada malaa'igtatattoos iskutallaabtatattoos saaxiib saxa ahtattoo ah octopuswaxaa la dhajiyay tattoostattoossawirrada raggatattoo tilmaanmuusikada muusikadatattoos qabaa'ilkatattoos eagletattoos qosol lehjimicsiga bisadahaTartoo ubax badantattoos ubaxtattoo indhahalibto libaaxtattoos sleevegadaal u laabokoi kalluunkaJoomatari Tattoostaraagada kubbaddashimbir shimbirTattoo Feathergaraacista gacmahatattoos qoortaDhaqdhaqaaqaTattoos Wadnahatattoos cagtanaqshadeynta mehndiwaxay jecel yihiin tattoosfikradaha tattooTattoo infinitytattoos moontattoos gacantatattoo biyo ah